Ithegi: betha | Martech Zone
Yintoni iHiti? Olunye uhlalutyo lweJargon
NgoMvulo, Meyi 14, 2007 NgoMvulo, Julayi 7, 2014 Douglas Karr
Kwiveki ephelileyo ndithathe usuku lomsebenzi ndaya kwiWebhu, inkomfa yengingqi kwi-Intanethi yeTekhnoloji. Nangona ndandisithethi esizimeleyo (kubhloga), ndifunde okuninzi malunga neendawo ezingezizo ezam i-bailiwick. Impumelelo yam kubloga ibisenzeka kakhulu ngenxa yokuthanda kunye nobuchule obukhulu kubuchwephesha. Ukubhloga kufuna ukuba ndibengumsebenzi wabo bonke kodwa ndingabi nankosi. Iinkomfa ezinje ngoku zindinceda ndizilolonge kwizakhono zam